2 oz ecacileyo PETG ingxowa izikhongozeli phezulu kunye 18-415 entanyeni entanjeni
Ibhotile yethu engu-2oz / 60ml yolwelo yenziwe ngezinto zePVC, ekucaca okungcono kunye nokuguda. Ibhotile ithe tyaba, enokubonelela ngesimo esingcono sesandla kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Igxalaba lama-20/415 linokuxhotyiswa ngempompo yokutshiza, impompo yegwebu, isiciko seflip kunye nekhonkco eliphathwayo emsileni. Ungayixhoma ibhotile yeplastiki naphina apho uyifunayo, ekulula ukuyiphatha nokuyisebenzisa. Uchatshazelwe yinyumoniya entsha, ungasebenzisa ibhotile ukupakisha isibulala-ntsholongwane, usisebenzise kuhambo lwakho nakwiiofisi, okanye ukupakisha njengezithambisi zezandla kunye nezinye iimveliso zononophelo.
Zonke iintlobo ze liquid
45 / 32mm
Egqithileyo I-100 oz emhlophe yeHDPE yeebhotile zeebhotile ezine-40-410 zokugqiba kwentamo
Okulandelayo: 10 ml ibhotile e-pink ejikelezayo ene-14-410 entanyeni